Wax soosaarayaasha & Shirkadaha Qaab Keli ah & 2K - Shiinaha Hal Toogasho & Warshadda Caarada ee 2K
Wax soosaarka wax soo saarka Shiinaha
Caaryada la isku duro waa qayb siisa qaab iyo cabir shay balaastik ah inta lagu jiro waxqabadka. In kasta oo qaab dhismeedka wax u ekaanta uu ku kala duwanaan karo iyadoo kuxiran nooca iyo waxqabadka balaastigga, qaabka iyo qaab dhismeedka wax soo saarka balaastigga, iyo nooca mashiinka duritaanka, qaab dhismeedka aasaasiga ah waa isku mid
Shirkadda wax taaj oo kale ee duritaanka gudaha
Naqshadeynta caaryada iyo waxsoosaarka ayaa xiriir dhow la leh wax soo saarka caagga. Guusha ama guuldarada soosaarida balaastiggu waxay kuxirantahay ilaa xad waxbadan oo ku saabsan saamaynta naqshadeynta caaryada iyo tayada waxsoosaarka caaryada, halka naqshada caaryada caaga ah ay kusalaysan tahay naqshadeynta badeecada saxda ah.
Qalabka tayo sare leh caaryada duro caag ah
Qalabka iyo alaabooyinka aan u isticmaalno nolol maalmeedka, waxay ka kooban yihiin salka mashiinka mashiinka, duubista mashiinka banaanka, ilaa shaashad yar, badhanka iyo kiiska qalabka guryaha ee kala duwan, oo dhammaantood xiriir dhow la leh qaabeynta.
2K Double dhinta Qaab duritaanka caaga Caaga
2K wax taaj oo kale duray: wax taaj oo kale duray wax soo saarka la 2 qalab caag ah oo kala duwan ama 2 midabo: hufan oo dhaqaale
Waa maxay 2k caaryada la isku duro?
2K Qaab duritaanka, oo mararka qaar loo yaqaan 2 walxood 2 xabadood oo wax lagu sawiro ama 2 midab oo midab leh, waa geedi socod wax soo saar hal abuur leh oo loo adeegsado in lagu soo saaro qaybo isku murugsan oo adag oo ka kooban laba qalab oo kala duwan .....
2K Cirbadeynta lagu sameeyay hal mashiin oo loogu talagalay in lagu sameeyo laba cirbadood hal wareeg.
Wax taaj oo kale duro waa habka loo sameeyo qaybo caag ah caadadii by durayo wax caag la shubay at cadaadis sare galay caaryada bir ah. Sida qaababka kale ee caagagga wax lagu shubo, ka dib markii caagga la shubay lagu durayo caaryada, caaryada ayaa la qaboojiyaa oo loo furaa si loo muujiyo qayb adag oo caag ah.
Shanta cunsur ee waaweyn ayaa lagama maarmaan u ah ka shaqeynta wax ka qabashada laba-toogasho:
1. Qiimaynta caaryada iyo falanqaynta sheyga Kahor naqshadeynta caaryada, qiimeynta caaryada iyo falanqaynta alaabada waa lama huraan oo ay ka mid yihiin muuqaalka, cabirka iyo qaabka si looga fogaado dhibaato aan loo baahnayn oo ah qaab labo qaab midab ah.
2. Qaab dhismeedka Qaab dhismeedka naqshadeynta wanaagsan waa inuusan kaliya la kulmin baahida macaamiisha, laakiin sidoo kale uu badbaadiyo kharashaadka, yareeyo dhibaatada ka baaraandegidda, oo u gaabiyo waqtiga ka shaqeynta macaamiisha. Si tan loo gaaro, waa inaannaan si buuxda u wada dheef-buuxin shuruudaha macaamiisha, laakiin sidoo kale inaan faham buuxa ka helno mashiinka la isku duro, qaab-dhismeedka caaryada, farsamada farsamaynta iyo awoodda wax-soo-saarka ee warshad caaryada lafteeda.
3. Xulista qalabka Waxyaabaha xulashadu aad ayey muhiim ugu tahay mideynta laba-ciribtirka. Waa inay buuxisaa shuruudaha u adkeysiga xirashada, adkeysiga, waxqabadka jabka daalka, waxqabadka heerkulka sare, qabowga iyo kuleylka u adkeysiga kuleylka, iska caabbinta daxalka iwm
4. Qaybaha wax soo saarka iyo isku imaatinka Marka lagu daro naqshadeynta macquulka ah iyo xulashada maaddada, saxsanaanta wax-ku-shaandheynta laba-geesoodka ah ayaa sidoo kale muhiim u ah howlaha soo socda iyo isku imaatinka. Sidaa darteed, si loo hubiyo ka-shaqeynta saxda ah ee caaryada, qalabka wax-soo-saarka saqafka sare leh iyo farsamoyaqaannada khibradda leh waa inay noqdaan.
5. Imtixaanka caaryada Si looga fogaado luminta waqtiga iyo dhibaatada inta lagu jiro wax soo saarka ballaaran, waxaa lagama maarmaan ah in la isku hagaajiyo lana xakameeyo xaaladaha kala duwan ee waxqabadka ka dib marka caaryada la soo uruuriyo si loo helo heerkulka ugu fiican iyo xaaladaha cadaadiska. Nidaamka tijaabada, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco talaabooyinka hawlgalka oo macquul ah oo la duubo xuduudaha farsamo ee wax ku oolka ah ee habka tijaabada si loo fududeeyo wax soo saarka ballaaran ee badeecada.
Samaynta Qaab Muunad, Caaryada Custom, Warshadda caaryada, Soosaarayaasha caaryada, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Wax taaj oo kale galinta caaga ah,